Somalia Speaks: Manamafy Ny Feon’Ireo Somaliana Tsy Misy Mpihaino · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Febroary 2012 5:00 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, فارسی, Español, English
Iray amin'ireo firenena an-dalam-pandrosoana izay miafara any anatin'ny tontolon'ny media noho antony ratsy i Somalia: ady sivily, kere, haintany, ireo piraty Somaliana raha tsy hanonona afatsy vitsivitsy. Miaraka amin'ny fanampiana entin'ny sehatra fifanakalozana mipetraka ao amin'ny Ushahidi “Somalia Speaks“, manangona feo tsy misy mpihaino avy ao Somalia ny Al Jazeera amin'ny teny Anglisy amin'ny alàlan'ny SMS. Avadika ho amin'ny teny Anglisy ireo valinteny ary amin'ny farany dia raketina anaty sarintany. Afaka mandefa tatitra avy amin'ny alàlan'ny SMS amina laharana iraisam-pirenena ihany koa ny olona ary mandefa tsikera ao amin'ny aterineto ka anisan'izany ireo rohinà lahatsary, fampiakarana saripika, sy fanoritsoritana ny lahatsoratra.
Ny Somalia Speaks dia fiaraha-miasa eo amin'ny Souktel, ONG iray manome ireo tolotra fandefasana SMS, Ushahidi, Al Jazeera, Crowdflower, sy ilay Ivontoeran'ny Vondom-piarahamonin'ny Afrikana ivelan'ny tanindrazany.
Manazava i Patrick Meier avy ao amin'ny Ushahidi anatina lahatsoratra iray ao amin'ny bilaogin'ny Ushahidi fa:
Nametraka ny fanontaniana hoe “Ahoana ny fiatraikan'ny Fifandirana ao Somalia teo amin'ny fiainanao?” amin'ny teny Somaliana ny Souktel izay napetrany tamin'ireo mpanaraka azy miisa eo amin'ny 5,000 any amin'ireo faritra ara-jeografika tsy dia mahazo famatsiam-bola. Nahazo valiny an-tsoratra mihoatra ny 3000 ny Somalia Speaks, izay nadika, nosokajiana sy napetraka ara-jeografika tamin'ny alàlan'ny fampiasàna ity ‘plugin’ crowdflower ity. Mitatitra ny Co.exist ka manonona an'i Riyaad Minty, lohandohan'ny media sosialy Al Jazeera, amin'ny fomba fiasàn'ny ‘crowdsourcing’, na fitrandrahana vaovao avy eny ifotony. Mahatalanjona ireo valiny azo avy amin'ny vondrom-piarahamonina miteny ny teny Somaliana ao amin'ny aterineto, izay nirotsaka an-tsitrapo handika ireo tatitra avy amin'ny SMS. Misy ihany koa ny rohy mampifandray ireo tatitra an-tsarintany ireo sy ny sehatra fifanakalozan-kevitra ho an'ny daholobe ahafahan'ireo mpamaky mamaly sy mizara ny fomba fijeriny.
Mitatitra i Melissa Ulbricht ao amin'ny PBS's Mediashift:
Mpamaky iray, Awaale, nitsikera tao amin'ny bilaogin'ny Ushahidi fa takatry ny vahoaka Somaliana fa eo amin'olona roa fotsiny ny SMS. Araka izany dia mety hamaly ny SMS avy amin'ny Souktel izy ireo nefa tsy mahalala fa hipoitra ao anatin'ny Aterineto ny anaran'izy ireo ka mety hitondra azy ireo any amin'ny mpitari-tafika. Nomena toky izy fa nofafan'ny ekipan'ny Al-jazeera daholo ireo anarana manokana avy ao amin'ilay vohikala ho an'ny daholobe.
Ny Mobile Media Toolkit dia manana fandalinana feno mikasika ity tetikasa ity.